သင်ကြိုးစားသင့်သောမက္ကဆီကို၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများ ၇ ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | gastronomy, မက္ကစီကို
မက္ကဆီကန်အစားအစာအကြောင်းပြောခြင်းဟာပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ gastronomy အကြောင်းပြောတာပါ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ် ယူနက်စကိုက။ ဤအခြေအနေသည်သင့်အားဟင်းလျာများနှင့်မက္ကစီကို၏အရေးပါမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုပေးလိမ့်မည်။ သင်မမေ့နိုင်သောပုံမှန်မက်ဆီကန်ဟင်းလျာများ ၇ ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်ယူဆောင်လာရသည်ကိုဖော်ပြပါလိမ့်မည်။
စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အမျိုးမျိုးသောဟင်းလျာများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပါဝင်ပစ္စည်းများရော၊ ပြည်နယ်တစ်ခုစီနှင့်မြို့တစ်မြို့ချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်မီးဖိုချောင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မက္ကဆီကို၏ပုံမှန်အစားအစာဖြစ်သောထိုအစားအစာများအကြောင်းသင်နှင့်သွားပြောပါမည် တစ်နိုင်ငံလုံးမှဘုံချက်ပြုတ်နည်းများ.
1 မက္ကဆီကို၏ပုံမှန်အစားအစာ: သမိုင်းတစ်နည်းနည်း
2.1 အဆိုပါ Taco
2.2 Burritos နှင့် fajitas
2.3 အဆိုပါမှဲ့, မက္ကစီကို၏ပုံမှန်အစားအစာတို့တွင်အခြားဂန္
2.4 ဝက်ဝက် Pibil
2.5 Escamoles နှင့်ကျိုင်းကောင်
2.7 အချိုပွဲ: bean သကြားလုံး
လက်ရှိမက္ကဆီကန် gastronomy ၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည် ကိုလံဘီယာမတိုင်မီအလွှာနှင့်စပိန်အမွေအနှစ်တို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ အာဖရိက၊ အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ပြင်သစ်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုများကိုပင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီကကမ္ဘာမှ၎င်းတွင်ပါဝင်သောအရာများပါဝင်သည်။ ဥပမာ, ပြောင်းဖူး, ငရုတ်သီး, ပဲ, ခရမ်းချဉ်သီး, ထောပတ်သီး နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်မြောက်မြားစွာနံ့သာမျိုး အဆိုပါpápalo, epazote သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောအရွက်.
သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးကိုဥရောပကဲ့သို့သောသူများကပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် ဂျုံ၊ ဆန်၊ ကော်ဖီ နှင့်လည်းမွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပင်လယ်အော်အရွက်၊ ဇီ၊ oregano၊ လှံတံသို့မဟုတ်နံနံပါး။ သူတို့ကစပိန်လူမျိုးတွေနဲ့တောင်လာကြတယ် ဝက်သားသို့မဟုတ်ကြက်သားကဲ့သို့သောအသားများ y လိမ္မော်သီး၊ သံပုရာသို့မဟုတ်ငှက်ပျောသီးကဲ့သို့သောအသီးများ.
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲဒါတွေအားလုံးရဲ့ရလဒ်ကအမှတ်အသားပြုထားတဲ့အစားအစာပဲ မတူကွဲပြားမှု အဆိုပါ Aztec တိုင်းပြည်တက်သောကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များအကြား။ Chiapas သူ့ဟာသူလုပ်ဖို့ထက် Baja California ၏ gastronomy အကြောင်းကိုပြောခြင်းသည်အတူတူမဟုတ်ပါ။ သို့သော်မက္ကဆီကို၏ပုံမှန်အစားအစာအားလုံးတွင်တူညီသောအခြေခံရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်တူသောပါဝင်ပစ္စည်းများအပေါ်အခြေခံပြီးကြောင်းပြောနိုင်ပါတယ် ပြောင်းဖူး, ငရုတ်သီးနှင့်ပဲအဖြစ်ကောင်းစွာအချို့၌တည်၏ အချက်အပြုတ်နည်းစနစ်များ အဲဒီပွဲစဉ်။
မက္ကဆီကန်အစားအစာများဖြစ်သောချက်ပြုတ်နည်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်အနှစ်ချုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံ၏မည်သည့်inရိယာမှမဆိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သောပုံမှန်ဟင်းလျာခုနစ်လုံးကိုအာရုံစိုက်သွားမည် ဆိုနိုရာ ထ Veracruz (ငါတို့မင်းကိုခွင့်ပြုပါ ဒီမြို့ကိုလမ်းညွှန်ပါ) နှင့်ထံမှ Jalisco ထ Quintana Roo။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မက္ကဆီကိုမှကျွန်ုပ်တို့၏ gastronomic အဆိုပြုချက်ကိုသင့်အားတင်ပြမည်။
ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ပန်းကန်ဖြစ်ကြသည် လူကြိုက်အများဆုံး မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၏နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်ပြီးယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်နိုင်ငံ၏အစားအစာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်လူ ဦး ရေထူထပ်လာသည် စာပိုဒ်တိုများထားရှိပါသည် သူတို့နှင့်အတူ။ ဥပမာအားဖြင့်, "taco ပစ်" ကိုစားသွားသို့မဟုတ် "tacos al သင်းအုပ်ဆရာ, မေတ္တာမရှိခြင်း၌" ၏ပြောရလျှင်
စိတ်ဝင်စားစရာကသင်၏ပြင်ဆင်မှုသည်ပြင်ဆင်ရန်မလွယ်ကူခဲ့ပါ။ အကြောင်းဖြစ်သည် ပြောင်းဖူးသို့မဟုတ်ဂျုံမှုန့် tortillas တစ် ဦး ပစ္စည်းသွင်းထားရာအတွင်း။ ဒီမှာအတိအကျကတော့တာကစ်တန်ဖိုးရဲ့တည်ရှိမှုကသူတို့အတွင်းမှာရှိတာတွေပေါ်မူတည်ပြီး၊ သူတို့ဟာဟင်းပွဲအမျိုးမျိုးကိုထွက်လာပြီးနာမည်အမျိုးမျိုးရကြတယ်။ သို့သော်လူကြိုက်အများဆုံးနှစ်ခုမှာ -
သင်းအုပ်ဆရာ Tacos။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုဖော်ပြပြီးပြီ၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ဘာတွေပါဝင်တယ်ဆိုတာကိုငါတို့ပြောပြမယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းအားအသားဖြင့်ဖြည့်နိုင်သည်။ ဒီ marinade ကိုနံ့သာမျိုး၊ ကြက်သွန်နီ၊ နာနတ်သီးနှင့်နံနံပင်အပြင်ဝက်အူချောင်းများစွာကိုလည်းထည့်သွင်းထားသည်။
ရွှေ tacos။ သူတို့ရဲ့အမှု၌, အဆာဖျက်စီးကြက်သားအသား, ပဲနှင့်အာလူးဖြင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာဒီနည်းကိုကြော်ပြီးရင်ဒိန်ခဲ၊ ဆလတ်၊ အချို့သောဒေသများတွင်၎င်းတို့ကိုစိမ်းလန်းသောအခြားငံပြာရည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြက်သားဟင်းရည်နှင့်အတူစားကြသည်။
Burritos နှင့် fajitas
သည်အခြားချက်ပြုတ်နည်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပေမယ့်, သူတို့နေဆဲဖြစ်သည် Taco ကျပ် ကွဲပြားခြားနားသောထုတ်ကုန်များ။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသားအမျိုးမျိုး၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်သီးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်များသောအားဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည် refried ပဲမျိုးစုံ နှင့်အခြားအပါအ။
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတူပင်ပြောပြနိုင်ပါတယ် quesadillas။ သူတို့ဟာအထူးသဖြင့်ဒိန်ခဲဟာသူတို့အသားဖြူရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပေမယ့်လည်းပြောင်းဖူးကိတ်မုန့်တွေပါ။ သို့သော်သင်မူရင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါကရိုးရာပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင်သယ်ဆောင်လာသည့်အရာတစ်ခုကိုတောင်းပါ ဖရုံသီးပန်းပွင့်.
Aztec နိုင်ငံတွင်မည်သည့်ဆော့စ်အမျိုးအစားမဆိုပြုလုပ်သည် ငရုတ်ကောင်း, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အခြားအမွှေးအကြိုင် နာမကိုလက်ခံရရှိသည် မှဲ့။ ဒီကနေထောပတ်သီးနှင့်ထိုဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ပြုလုပ်သောအရာကိုရရှိသည်။ သင်မှန်းဆခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောခဲ့သည် guacamoleမက္ကဆီကိုရှိ၎င်း၏နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်လူသိအများဆုံးဆော့စ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်ကိုလံဘီယာမတိုင်မီခေတ်မှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်မေယာလူမျိုးများအဖို့ယင်းသည်ထူးခြားသောအမှတ်လက္ခဏာများရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိမ့်မည်။
သို့သော်ယခုခေတ်တွင် ပို၍ တိကျသောငံပြာရည်ကိုမက္ကဆီကို၏ပုံမှန်အစားအစာနှင့်ဆိုင်သောမှဲ့ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အခြားနံ့သာမျိုးများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်း၎င်းတွင်ပါရှိသည် ချောကလက်။ extension အားဖြင့်၎င်းကိုလည်းခေါ်သည် ဒီငံပြာရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အသားသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်.
ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်စာရွက်ရှိသော်လည်းမက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံးမှာယင်းဖြစ်သည် မှဲ့ poblano။ ဒီတော့လူကြိုက်များလာတာနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကျင်းပတယ် Puebla un ပွဲတော် ဒီငံပြာရည်ထံအပ်နှံ။ ၎င်းကိုငရုတ်ကောင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ချောကလက်နှင့်နံ့သာမျိုးစုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ သင်စမ်းကြည့်ပါကသင်စိတ်ပျက်စရာမရှိပါ။
Pibil မာယာဟူသောဝေါဟာရသည်aတွင်ပြင်ဆင်ထားသောမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုရည်ညွှန်းရန်အသုံးပြုသည် မြေကြီးမီးဖို။ ဤသည်အဖြစ်လူသိများခဲ့သည် pib ပြီးတော့ဒီပန်းကန်ရဲ့နာမည်ကလာတယ်။ မူလကကအတွက်လူကြိုက်များခဲ့သည် ယူကာတန်ကျွန်းဆွယ်အဘယ်မှာရှိအဖိုးတန်မြေ သင်ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့အကြံပြုသောအရာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်မက္ကဆီကိုနှင့်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
ဒါဟာပါဝင်ပါသည် ဝက်သား ကိုလံဘီယာခေတ်မတိုင်မီကအသုံးပြုခဲ့သည့်အမွှေးအကြိုင်များ၌ Achiote တွင် marinated လုပ်သည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုမြေကြီးမီးဖိုထဲတွင်ထည့်သည်သို့မဟုတ်အလားတူကြက်သွန်နီ၊ ဤအရာအားလုံးကိုခြောက်သွေ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ငှက်ပျောရွက်များဖြင့်ပတ်။ တစ်ညတည်းချက်ပြုတ်နိုင်သည်။
ယုတ္တိနည်းအရဤပန်းကန်ကိုအစဉ်အလာအတိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်း၎င်းသည်အရသာရှိဆဲပင်ဖြစ်သည်။ ငံပြာရည်အတွက် achiote ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရုံမျှမက oregano၊ ဇီ၊ သံလွင်ဆီ၊
မက္ကစီကို၏ပုံမှန်အစားအစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပန်းကန်ကိုထည့်သွင်းထားသည်၊ ၎င်းသည်၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုသင်မစမ်းချင်သောဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတိပေးသည်။ အကြောင်းပြချက်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါ escamoles ဖြစ်ကြသည် ကျောက်စရစ်ခဲပုရွက်ဆိတ်လောင်း ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကကတည်းက Aztec နိုင်ငံတွင်စားခဲ့သည်။ မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြောရင်သူတို့ကလည်းသူတို့ကိုခေါ်တယ် "မက္ကဆီကို၏ caviar"သူတို့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတာကိုသင်ရနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့ကိုများသောအားဖြင့်ကြော်သောအစားအစာများနှင့်ဥများ၊
ကျန်တဲ့ကျိုင်းကောင်တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်တူပြောနိုင်တယ်။ အကြောင်းဖြစ်သည် ကျိုင်းကောင်လေး ၎င်းတို့သည်အက်ဖ်ရီတီစ်တီဗွီသို့မဟုတ် tacos နှင့် quesadillas ကဲ့သို့ပင်ကြော်ခြင်းကိုခံရသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ နှစ် ဦး စလုံးရဲရင့်သောအာခေါင်အတွက်အကြံပြုသည်။
ဒါကအင်အားကြီး လင်းနို့ ၎င်းတွင်ဟင်းရည်အပြင် cacahuazintle အမျိုးမျိုးပြောင်းဖူးစေ့များ၊ ကြက်၊ ဝက်သားအစရှိသည့်အခြားအရာများစွာပါ ၀ င်သည်။ ယင်းတို့အနက်ကြက်သွန်နီ၊ ဆလတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ မုန်လာဥ၊ ထောပတ်သီး၊ ဒိန်ခဲသို့မဟုတ်ဝက်သားအခွံများပါဝင်သည်။
ပြီးတော့သင်ကိုယ်တိုင်ရှာနိုင်သည် pozole အမျိုးအစားများ။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည် အဖြူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းဖူး၊ အသားတွေ၊ စပ်ပိုမိုပီပီပြင်ပြင်နှင့်အလွန်အရသာရှိနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟစ်စပန်းနစ်ခေတ်မတိုင်မီက၎င်း၏ဇာစ်မြစ်ကိုရှာဖွေရမည်။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်း၏အမည်မှာနာဝါးလ်မှဖြစ်သည် tlapozonalliအခြားသီအိုရီများက ၄ င်း၏အမည်ကိုပေးရမည်ဟုဆိုသော်လည်း "ပြုတ်" သို့မဟုတ် "တောက်ပသော" ကိုဆိုလိုသည် posoli“ ပြောင်းဖူးချက်ပြုတ်ခြင်း” ဟုပြန်ဆိုနိုင်သော Cahita ဘာသာစကားမှဝေါဟာရတစ်ခု။
အချိုပွဲ: bean သကြားလုံး
ငါတို့မက္ကဆီကန်အစားအစာကိုအချိုပွဲအကြောင်းမပြောဘဲမပြီးနိုင်တော့ဘူး။ တချို့ကငါတို့တိုင်းပြည်မှာသိတဲ့လူတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်။ မက္ကဆီကန်အစားအစာတွင်ဟစ်စပန်းနစ်ပါဝင်မှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါတယ် Churrosအဆိုပါ ဆန်စပါးအဆိုပါ fritters သို့မဟုတ် jericallasကျွန်တော်တို့ရဲ့ custard ဆင်တူသည်။
သို့သော်အခြားအချိုပွဲများသည်ဌာနေတိုင်းရင်းသားများဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကတစ်ခုဖြစ်သည် bean သကြားလုံး, Aztec နိုင်ငံ၏ gastronomy တွင်ဒါပစ္စုပ္ပန်ထုတ်ကုန်။ ၎င်းကိုနို့၊ ကြက်ဥအနှစ်၊ သစ်ကြံပိုး၊ သကြား၊ ကြိတ်ခွဲထားသောဗာဒံသီး၊ walnuts နှင့် cornstarch တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးဆားမပါဘဲချက်သည့်ပဲများမှဖြစ်သည်။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းလူကြိုက်များကြသည် ခရိုင်ရေ၊ ပျားရည်၊ မြေပဲ၊ ထောပတ်နှင့်ပြုလုပ်ထားသောကိတ်မုန့်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ငါတို့အကြောင်းကိုထပ်တူပြောလို့ရတယ် အနက်ရောင် sapote, အဘယ်သူ၏အခြေစိုက်စခန်းဒါခေါ်သစ်ပင်၏အသီးဖြစ်ပြီးအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများအကြားကြက်ဥ, သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့်သကြားဖြင့်လိုက်ပါသွားသော။ ၎င်း၏အရသာသည်အလွန်စပ်စုသောကြောင့်ချောကလက်နှင့်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အကြံပြုပါသည် ကွမ်းခြံကုန်း သို့မဟုတ် cob အပေါ်လတ်ဆတ်သောပြောင်းဖူး။ ၎င်းကိုချိုစေရန်အတွက်၎င်းသည်ကြက်ဥ၊ ထောပတ်နှင့်ဂျုံကဲ့သို့သောအခြားပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်နို့နှင့်သစ်ကြံပိုးခေါက်များပါရှိသည်။ ရိုးရှင်းစွာအရသာ။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်မီးဖိုချောင်၏မီးမောင်းထိုးပြစေသည့်ဟင်းလျာခုနစ်မျိုးအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည် မက္ကဆီကို၏ပုံမှန်အစားအစာ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သောအခြားသူများပါ ၀ င်နိုင်သည် ထုံးဟင်းချိုလူကြိုက်များ မက်လီအဆိုပါ tortilla ချစ်ပ် သို့မဟုတ် marquesitas။ ရှေ့ဆက်သူတို့ကိုစမ်းသပ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » မက္ကစီကို » မက္ကဆီကို၏ပုံမှန်ဟင်းလျာများ ၇
နွေ ဦး ရာသီ၌ကားဖြင့်လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးစပိန်မြို့ကြီးများ
ရောမသို့မသွားမီကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင် ၉ ခု